Zvatiri - THE INDIAN FACE
TINOTADZWA KUTI TIVHURE:
Makore anodarika gumi nematatu apfuura The Indian Face® yakauya kune indasitiri yemafashoni, kubvira ipapo tanga tichiendesa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vatambi, vafambi uye vese avo vanoshuvira kutevedzera huzivi hwehupenyu. Tiri kambani yakagadzirwa uye inofarira zvemitambo, adrenaline uye kushanya .
TIRI YEMAHARA MWEYA:
Isu tiri mweya wakasununguka uye ndihwo hunhu hwedu hwakanyanya kukosha. Isu tiri murudo nehupenyu uye isu tinoda kunyatsoshandisa sekondi yega yega, sekunge ndiyo yekupedzisira. Isu tinotiza kubva kune yakasimbiswa tsika, isu hatiteedzere uye isu tinosvetukira kumusoro muzviitiko zvitsva.
Kutanga kuita mutambo wechikamu ndeyekufungidzira kuti hatidi chero munhu anodzvinyirira, ndosaka isu tave tichitsvaga kubva 2007 kuti tibatanidze vatengi vedu nezvinhu zvemhando yepamusoro zvekuti hapana chinogona kuvamisa.
TIRI VEMAHARA VEMAHARA
Isu tinonzwa semaIndia, kunyangwe isu tichikura uye tichichinja, midzi yedu inogara isina kugadzikana uye ichitiyeuchidza kwatinobva nekwatiri kuenda. Kutenda kune zvese izvi, isu takakwanisa kushambadzira zvishongedzo zvevarume nevakadzi munyika dzinopfuura makumi matatu muEurope, America, Asia neOceania.
Kunyangwe isu tichida kukosha uye iko kwechokwadi, isu tichiri muzera redhijitari saka kana iwe usiri kuda kutitumira zviratidzo zvehutsi, unogona kutitumira meseji mune ino fomu uye tinokupindura nekukurumidza sezvazvinogona.